Indlela pint GoDaddy Ukuze Chofoza Funnels - Uphondo Of The Day
Manje wena mayelana ukuze ufunde ukuthi pint GoDaddy ukuze uchofoze funnels ngezinyathelo ezintathu ezilula.
Ngaphambi kokuthi uqale le nqubo uzodinga ukuze uqiniseke impande zesizinda sakho ukuthi usuvele usethe i.
Ngemva kwalokho une ukuya isinyathelo 1: udinga ukwakha irekhodi le-CNAME ngokucula kuwebhusayithi yabo uma usuqedile udinga ukukhetha izilungiselelo DNS kwesizinda yakho.
Qiniseka ukuthi i-CNAME elinegama WWW itholakala, uma ukwenza ukuhlela kwelitshe uqondiswe iwebhusayithi clickfunnel sika.
Ngemva usuqedile iya ku isinyathelo 2: engeza umthetho phambili ebonakalayo phansi izilungiselelo phambili, ngokukhetha i-https://, ngokufaka kwesizinda sakho, yokuqondisa it up in "unomphela" futhi "phambili kuphela".
Buyekeza kanye nokugcina.
Manje siya 3 futhi isinyathelo sokugcina: ngokungeza kwesizinda sakho nge Clickfunnels.
Lona omunye elula njengoba zonke ukwenze kungcono chofoza "zisebenzisa isizinda esivele sikhona" okukhethwa kukho, okokufaka kwesizinda sakho, qhafaza inkinobho ethi "isinyathelo kwenziwe" okukhethwa kukho, ukuhlobanisa isizinda sakho nge uphondo futhi aqonde SSL wakho.